Labiska oo gabdhaha muslimeed ku adag - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fashin show lagu soo bandhigay dharka dumarka muslimka. Foto.Mona Ismail, Sveriges Radio
Labiska oo gabdhaha muslimeed ku adag
Publicerat torsdag 30 april 2015 kl 13.49
Gabdhaha muslimka ah ee hijaabka sita wey ku adagtahaay si ay dhar uga heli lahayeen waddankan, arrintan oo laga hadlayay shirka" Muslim Cool" ay Meriem Moufid iyo Iman Aldebe ka soo qeyb galeen.
-Wa in haweenka muslimka ah aan u fududeeyo sii ay suuqa shaqada u soo galaan, oo ayn midabkor u arkiin ,waxan doonaya in an casrigareeyo dharka dumarka muslimmiyeed ,gaarahaan kuwa dhaqameed , kana qaadin muhimadda in gabadh kasta oo diinta racsaan is asturto, ayey tidhi Iman Aldebe.
Iman Aldebe ayaa ah gabadh dhawaan soo sartay dhar cusub oo ay ugu talo gashay in gabdhaha muslimka ah ay ku labistaan, dharkan oo turbaanadda madaxa ku jiran, oo ay u soo sartay wadamadda khaliijiga ah, ayey sugaysaa in ay sweden ka shaciso dhawaan.
Iyadda oo hoore cunsurnimo ku aragtay shaqooyinkii ay soo martay, ayey rajeynaysa in labiska gabdhaha muslimeed ay soo saari doonto, noqdaan kuwo qurxoon oo mustaqbalka noqondoona qaar ixtiraam la siiyo, sawirkaas oo ay doonayso in ay muujiso markey sanacadda dhar ay u soo saari doonto waddamada khalijiga ah, dayrta soo socda.
Wexey racisay ,maha in haweenka muslimka ah si jumcad ah loo arko, wa in gabadh kasta shakhsi loo eego, ayey tidhi.
Meriem Moufid, ayaa ah gabadh dareensan in ay baahi weyn ka jirto dhar ku haboon haweenka muslimeed e ku nool sweden, taas oo ay ka sameysas booga Instragm oo ay ku magacabday ”Hijab- Muslim” oo 170 000 oo qofi uga soo booqato aduunka dhan, halkan oo ay ku tusto habka labiska iyo sida xijaabka loo xidho.
-Waxaan rajeeynaya in gabdaha muslimka ah an u fududeeyo sidey u labisan lahayeen. Marmarka qaarkood wey igu atkaata in an dhar igu haboon ka helo dukaamadda waddankan, ayey tidhi.
-Hadii aan helo gonooyin dha- dheer, gaarahaan kuwa maxiga la yidhaahdo , igu ma atka in an labis heloo.
Haseyeshe Meriem wey ka welwelsantahay in goonoyinkan la joojin doono mustaqbalka, wexeyna is weydiisay, wexey sameyn doonto ?
Meriem oo ka timid dalka Tunisia ayaa ka shekeynaysa faraqa u dhaxeeya sweden iyo Tunisia:
-Tunisia cunsurnimo kama jirto, lakiin halkaan ixtiraam ma jiro, si xun ayaa lugu egayaa, wa lugu aflagaadaya, sababtu wexey ka imanaysa in an ahay shakhsi muslim ah, wanan dareen -sanahay in ey egidaasi ka timid in hijab aan sito.
Dhinaca kale Iman ayaa i tusaysaa sidey u fakartey markeey dharka ay soo saareysey.
-Hadii la eego beryihii hoore iyo maalmahan, gabdhaha muslimka ah, ama ajanabiga ah , wey u fududahay in ay shaqo abuurtaan, booq cusub ayaad furankartaa, ayey tidhi.
-Aniga qudheyda markii an shaqadda wayey waxaan go´aamiyay in an shaqadeeyda keli aburankaro, ayey tidhi.